Isaladi "lamagilebhisi" aligcini nje elihle futhi libukeka lihle kakhulu etafuleni. Zonke izingxenye ezikulo zihlanganiswa ngokuvumelana, zakha isidlo esiphundu esiphundu nesiphunga. Izindlela ezimbili zokupheka ezitholakala ngezansi zihlinzekwa ngezansi.
Isaladi eqoshiwe enezinkukhu - iresiphi
inyama yenkukhu (i-pulp) - 320 g;
amaqanda ezinkukhu akhethiwe (obilisiwe kanzima) - ama-3 ama-pcs.;
amagilebhisi - 270 g;
isaladi iceberg noma iklabishi Peking - ukunambitha;
ushizi ngezinhlobo ezibabayo kanzima - 170 g;
ama-walnuts - 140 g;
imayonnaise iyingqayizivele - ukunambitha;
usawoti, iodididi kanye nopelepele - ukunambitha.
Inkukhu inyama kumele ibiliswe ekulungiseleleni okugcwele, ikhohliwe futhi igalelwe ama cubes amancane. Amaqanda abilisiwe aphekwe kusengaphambili, ahlanza futhi agayiwe nge-grater. Ngendlela efanayo, gaya izinhlobo ezinzima ze-cheque piquant. Ama-walnuts omisiwe epanini elomile elomile noma ebhawini lokubhaka kuhhavini, ngemva kwalokho sigaya izinhlamvu emanzini noma siwagcobe ngokuchoboza kuze kube yilapho ephakathi.
Izivini zihlanjululwa, zomisiwe, zihlukaniswe ngesigamu futhi zisuse amathambo (uma ikhona).
Ukuhlobisa isaladi, ukubeka amaqabunga esaladi, amaqabunga e-iceberg noma amaqabunga e-Peking amaqabunga esitsheni. Phezulu ngesendlalelo sokuqala ubeke izintanzi zezinkukhu bese uzigcoba ngemayonnaise. Bese uvula amaqanda futhi uphinde uthole imayonnaise. Bese ubeka amantongomane kanye noshizi, ubheke phezulu kwesaladi nge imayonnaise, futhi phezulu ubeke isigamu amagilebhisi.
"Isaladi ye-grape" isinkhukhu ephimayo kanye ne-pistachios - iresiphi
ukubhema inkukhu - 310 g;
amagilebhisi - 390 g;
isaladi iceberg - 420 g;
ama-pistachios, amafutha angenasiphelo - 240 g;
ukhukhamba oqoshiwe - 180 g;
ama-clove garlic - ama-2 ama-pcs;
imayonnaise zakudala - 210 g.
Ngenkathi amaqanda abilisiwe, sihlambulula futhi siwasika ama-pistachios, usike inyama yenkukhu ephumiwe kanye namakhukhamba aqoshiwe abe ngamacube. Sika amagilebhisi sibe yi-halves futhi, uma kukhona amathambo, akhiphe. Gaya ushizi e-grater, futhi ngendlela efanayo ugaye amaqanda aphelile aphethwe. Siyahlanza futhi sicindezele amazinyo e-garlic ngokusebenzisa ucingo.
Ake sithathe i-lettuce le-iceberg emaqabungeni bese sinquma ingxenye ehlanganisiwe. Wonke amanye amashidi ahlukaniswa ama-cubes amakhulu. Sixhuma zonke izithako ezilungiselelwe esitsheni, engeza imayonnaise nokuxuba. Njengomthetho, usawoti ovela ku-pistachios, ukhukhamba kanye nenkukhu ebhemayo ukwanele ukwenza ukunambitheka kwesaladi kuvumelane, kodwa kunoma yikuphi, sizosusa isampula futhi, uma kunesidingo, wengeze.
Ukwenza isaladi, siyifaka esitsheni ngesimo seqoqo lamagilebhisi, sisabalalisa ama-halves amagilebhisi avela phezulu. Ungabeka ngaphambi kokubeka amaqabunga esaladi phansi kwesitsha.
Hare ngesikhilimu omuncu - iresiphi
Isobho nge amakhowe kanye ushizi ocibilikile
Ukunambitha kwe-shish kebab - imibono yokuqala yokwenza izitsha ze-picnic ezisheshayo
I-pasta eqoshiwe - iresiphi
Duck ezigxotshiwe neklabishi
Iklabishi ihamba emagqabini amagilebhisi
Olivier nge-sausage - iresiphi
Ingulube ye-ngulube - iresiphi
Ispinachi puree isobho
Ama-cutlets ama-juicy kuhhavini
Ungathatha kanjani iDyufaston?
Indlela yokuvuma kumfana othandweni?
Telegonia noma ithonya lendoda yokuqala - inganekwane noma ngokoqobo?
UJamie Oliver noDuchess of Camille baba yingxenye yempi yeCulinary
Ureaplasmosis: izimpawu - kanjani ukuqaphela lesi sifo?
Umuntu we-Leo onothando uziphatha kanjani?
Shoes of 2014
Amabhodlela aseDoupage ngezindwangu
Indlela yokuziphatha emngcwabeni?
I-Costa Rica - ukushisa
Iklabishi ngesiGeorgia - iresiphi ye-classic yokudla okumnandi
Ukulungiselela imibhede yegalikhi
Izingubo zangamafutha oboya bomvelo
Brownie nge-cottage shizi
I-Humus yindlela yokupheka
Ungaba kanjani igunya?
Ama-emollients for izingane - amagama ezidakamizwa
I-Psoriasis - ukwelashwa ngamakhambi abantu